China DAM1 Series Kwes overload Operation Molded Case Circuit Breaker (Ofu ụdị) ụlọ ọrụ na-emepụta | DaDa
DAM1 Series Kwes overload Operation Molded Case Circuit emebi (Ofu ụdị)
Ọrụ nchekwa nchebe: (Maka nchebe n'okpuru ọnọdụ ibu)
Bimetal, nke na-enye nchebe ọkụ, nwere ngwakọta nke ọla abụọ nwere ọnụ ọgụgụ mgbatị dị iche iche n’okpuru okpomọkụ. Mgbe bimetal na-ewe iwe dị ọkụ, ọ na-ehulata nchara na obere ndọtị. N'ụzọ dị otú a, a na-ewepụta ọkwa nke na-enyere aka ịmeghe usoro mmebi iwu iji gbanyụọ onye ahụ na-emebi emebi. Speedgba ọsọ nke bimetal dị kpọmkwem na nha nke ugbu a na-agafe na onye na-agbaji. N'ihi na, mmụba nke ugbu a pụtara mmụba nke okpomọkụ. N'ụzọ dị otú a, ọrụ nchebe ugbu a nke onye na-emebi ihe na-emezu site na bimetal na mmiri dị ugbu a karịa ọkwa dị ugbu a
Ọrụ nchedo ndọta (Maka nchebe n'okpuru ọnọdụ sekit dị mkpirikpi)
Ọrụ ọzọ nke onye na-emebi ihe bụ iji kpuchido njikọta ejikọtara na sekit dị mkpirikpi. Short circuit nwere ike ime dị ka a n'ihi nke kọntaktị nke n'ụzọ ọ bụla ọzọ ma ọ bụ na kọntaktị nke na-adọ-ala. Ebe ọ bụ na oke dị ugbu a ga-agabiga na eriri ma ọ bụrụ na ọ dị mkpirikpi, usoro sistemụ kwesịrị ịgbaji n'oge dị mkpirikpi n'ihi nchebe ọkụ. Mmebi kwesịrị ịrụ ozugbo oghere iji chebe ibu ọ jikọọ. Akụkụ na-arụ ọrụ a bụ usoro mmeghe arụmọrụ nke na-arụ ọrụ na ndọta nke magnetik kpatara
mpaghara nke obere oge dị
• Mfe onwe ha echichi nke inyeaka ngwaọrụ:
Oti mkpu na kọntaktị;
N'okpuru ntọhapụ volta;
Ijikwa sistemụ arụmọrụ;
Igwe ọrụ eletriki;
• Standard set nke ọ bụla circuit emebi bụ mejupụtara ejikọta busbars ma ọ bụ USB lugs, na-adọ separators, a set nke kposara na akụ maka ya arịgo n'elu ihe echichi panel.
• Site na enyemaka nke mpempe akwụkwọ pụrụ iche 125 na 160 nwere ike itinye na DIN-okporo ígwè.
• Ibu na akụkụ nke ndị na-agbaji okirikiri ndị a bụ site na 10-20% na-erughị nke ndị nrụpụta ụlọ ndị ọzọ tụrụ aro. Eziokwu a na-enye maka ịkwado obere igbe na ogwe. E wezụga nke ahụ, obere akụkụ na-eme ka o kwe omume ịgbanwe ndị ochie na-agbaji sekit na DAM1.
Ihe nkedo nke ndi ozo bu ihe nkiti. Ha na-egbo mkpa echichi nke ndị ọrụ obere ụzọ niile na nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na usoro nkesa ike. A na-etinye ha n'ọrụ n'ọtụtụ igwe, nchara mmanụ, ụlọ ọgwụ, usoro ụgbọ okporo ígwè, ọdụ ụgbọelu, ebe mgbakọ, ụlọ ọrụ ọfịs, ebe mgbakọ, ebe ihe nkiri, skyscrapers, na usoro ndị ọzọ buru ibu.
Ngalaba Eletrik Nke DAM1 MCCB Kpụrụ Case Circuit emebi
Thedị MCCB na-edozi magnetik
Gosiri Ugbu A-Na
10- 12,5-16-20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 -125 - 160 (150) E
• Icu:Ot-CO ule (O: Meghee maneuver, CO: Imechi mmeghe, t: echere oge)
• Ics:Ot-CO-t-CO ule (O: imeghe imegharị, CO: Imechi-Open imeghe, t: Oge echere)
NA / M Ọnọdụ: Ọ na-egosi na kọntaktị nke onye na-emebi ya emechila. N'ebe a, ihe mebiri emebi bụ nke dị n'elu
Ọnọdụ njem: Ọ na-egosi na emepe emepe bụ ihe mebiri emebi (maka ibu ma ọ bụ obere elekere). N'okwu a, onye na-agbaji mgbaji nọ n'etiti ọnọdụ dị n'etiti ọnọdụ ON na OFF. Iji were onye na-agbaji, nke dị na njem njem, gaa ọnọdụ ON; inupụ onye na-emebi ihe n’ala ka egosipụtara na akara akara OFF
A ga-etinye ụda na ụda “pịa” mgbe nke ahụ gasị, dọpụta lever dị ka egosipụtara na ON iji mechie onye ahụ na-emebi emebi
Gbanyụọ / 0 Ọnọdụ: Ọ na-egosi na kọntaktị nke onye na-emebi ya meghere. N'ụzọ dị otú a, onye na-agbaji mmiri na-anọ n'okpuru ọnọdụ.
Nchịkọta anụ ahụ nke DAM1-125 MCCB Kpụrụ Case Circuit emebi
Otu (EN 60947-2 / IEC 60947-2)
Ngwongwo Dielectric (V)
Ogologo oge (mm)
Nha nke MCCB Kpụrụ Case Circuit emebi
Nke gara aga: DAM1 Series Kwes Ma Magnetik Kemeghi Type Kpụrụ Case Circuit emebi (MCCB)
Osote: DAM3-160 MCCB Kpụrụ Case Circuit emebi
DAM1 Series Electronic Type Kpụrụ Case Circui ...
DAM1 Series Kwes Ma Magnetik Kemeghi Type ...